Wasiirka Arrimaha Gudaha Federaalka oo Gaalkacyo u Jooga Xoojinta heshiiska Puntland iyo Galmudug | SAHAN ONLINE
Wasiirka Arrimaha Gudaha Federaalka oo Gaalkacyo u Jooga Xoojinta heshiiska Puntland iyo Galmudug
GAALKACYO – Wasiirka Arrimaha Gudaha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya Cabdi Faarax Juxaa ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib markii maalmo ka hor magaalada ay heshiis ku kala saxiixdeen maamulada Puntland iyo Galmudug.
Cabdi Faarax Juxaa ayaa kulamo la leh Waxgaradka magaalada Gaalkacyo iyo mas’uuliyiinta labada maamul ,wuxuu kala hadli doonaan xoojinta heshiiska la kala saxiixday.
Wasiirka oo xalay ka qeybgalay kulan afur ah oo ay u sameeyeen Waxgaradka magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in dowladda Federaalka ay muhiim u tahay in xal nabadeed laga gaaro colaada magaalada Gaalkacyo.
Gaalkacyo muddo dheer meesha ka aloosan tahay qalaalasaha siyaasadeed iyo colaadaha Soomaaliya, waxay noqon kartaa meesha Soomaaliya nabada looga soo dabaali karo, waxaa qabaa in la raadiyo Gaalkacyo cusub, iyo Mudug cusub oo nabad lagu wada noolaado”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Wuxuu sheegay in Reer Gaalkacyo looga baahan yahay iney ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo wadajirka si loo soo ajar colaadihii afartanka sano ka jiray magaalada si Gaalkacyo tusaale ugu noqoto dalka oo dhan.
Wasiir Cabdi Faarax Juxaa ayaa safarkiisu yahay kii ugu horreeyey ee uu ku tago Gaalkacyo iyadoona maalin ka hor lagu soo gabagabeeyey Wadahadal u socday Wasiiro ka tirsan Galmudug iyo Puntland kaasoo heshiis nabadeed lagu gaaray.